Fananganana eo Ambony Sisam-paharavàna – Sy Ny Tantara Mampitebiteby – Anaty Alan’i Calais · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 8:37 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, Español, Ελληνικά, عربي, Deutsch, 繁體中文, Nederlands, English
Alan'i Calais, 17 janoary 2016, sary teo amin'ny Flickr-n'ny malachybrowne. Fahazoandalana CC BY 2.0
Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay, ny tanànan'i Calais any avaratr'i Frantsa dia nanao tetikasa roa ho fanarenana miaraka amin'ny fametrahana ny natiora ho ivo.
Ao amin'ny faritra atsinanan'ny tanàna ny voalohany, eo amin'ny ampahan-tany iray fantatra tamin'ny anarana hoe Jungle de Calais (Alan'i Calais) izay, tany amin'ny manodidina ny Janoary 2015, dia toeram-ponenana vonjimaika nipetrahan'ireo 10.000 mpitsoaponenana avy any Afganistana, Sodàna, Siria, Érythrée, Iràka, ary ireo firenena hafa isankarazany izay misy fifanoherana mitam-piadiana sy tsy filaminana ara-politika manakana an'ireo olompirenena ao aminy tsy handry fahalemana. Tamin'ny Oktobra 2016, nopotehina sy nofongorina tanteraka ilay toerana, nanafoana, tsy ireo fialokalofan'ireo mponina fotsiny, fa koa ireo fotodrafitsasa vonjimaika najoro tao: ireo trano fisakafoanana sy ireo fivarotana, maoske iray sy eglizy iray, izay niezaka nitondra ny maha-olona tao anatina tontolo feno hakiviana.
Nanapa-kevitra ny hanova isa sisa tavela tamin'ireo ala ho lasa tahirin-javaboahary ireo tomponandraikitra eo an-toerana, amin'ny alalan'ny filazàny izany ho “famelomam-bolo ny tontolo manodidina sy ny ekolojika” mampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry tsara tarehy, anisan'izany ireo orkidea, sy ny fisian'ireo voro-manidina sahala amin'ireo vorondrano (becassines) ary ireo sidintsidina (hirondelles). Fanavaozana iray faritana ho toy ny asa “famerenana indray ny natiora”:
Eo am-baravarana hidirana ao Calais, ireo tanin'anjavidy, fantatra ara-media amin'ny anarana hoe “jungle de Calais”, dia misy asa iray fakantàhaka amin'ny famolomam-bolao indray ny tontolo manodidina sy ny ekolojika, ahafahana mamorona fidirana vaovao ho an'ireo mponina hankany amin'ny valan-javaboahary iray maherin'ny 400 hektara.
Araka ireo tenin'i Michel Agier, [mpahay ny maha-olombelona] sady talen'ny fikarohana ao amin'ny Ivontoerana frantsay misahana ny fikarohana ho an'ny fampandrosoana (IRD) ary mpanoratra ny boky “La Jungle de Calais“, ny tena marina, dia fikasàna hamafa ny tantara nanàla baràka teo amin'io “tanàna vakiraoka” io ihany koa izy ity:
Misy fehezana krizy politika izay mahatonga ny fisian'ireo olona ho latsaka an-katerena tsy maintsy mivezivezy. Izay mahatezitra an'ireo olona ao Calais, dia ny fomba fitondra ratsy atao an'ireo olona ao, sady, izao koa, ny endrika ratsin'ny tanànan'izy ireo noho io antony io. Tsy ny toby ara-bakiteny na ireo mpifindra monina ihany, fa tena io tsy fisiana vahaolana io.
Tany ngazana midadasika misy fasika sy ireo kirihitrala, miaraka amin'ireo kamory vitsivitsy sy ireo toeram-pialokalofana namboarin'ny alemàna iray nanorim-ponenana tao tamin'ny taona 40, ilay valan-javaboahary vaovao, nisokatra tamin'ny volana jona 2018. Azo'ireo mpitisidika atao ny mandeha amin'ny lalankely kely vita amin'ny hazo fohifohy hatreny amin'ny toerana fanarahamaso, izay ahafahan'izy ireo mitazana ny voary ety ambanimbany, ary ery amin'ny farany ambany ny arabe migodana tena be fifamoivoizana izay mitondra mankany amin'ny seranan'ireo sambo mpitondra fiara sy ireo orinasa manamarika ny faritra indostrialy ao Calais. .
Tsy lavitra an'io ny tetikasa faharoa, ao anatin'ny faritr'i Calais antsoina hoe Beau-Marais. Vondrom-piarahamonina eritreànina iray no monina ao volana vitsivitsy izao, ao anaty ala kely antsoina hoe Little Forest – iray amin'ireo anarantanin'ny jeografia hafa ao Calais natsangan'ireo mpifindra monina nandalo tao. Isanandro, mitondra ho azy ireo ny sakafo, rano ary vokatra fikarakarana ny tena manokana ireo fikambanana eo an-toerana mba ho ezaka fanampiana amin'ny famaliana ireo filàna fototra ho an'ireo olona tena tsy raharahain'ny manampahefana. Tafahitsoka ao anelanelan'ny lalambe migodana iray, ny lisea iray ary toeram-ponenana iray, tonga dia eo akaikin'ireo mponina hafa eo an-toerana ny tobin'i Little forest. Matetika miteraka disadisa ny fifanakaikezana be loatra – indrindra indrindra mikasika ny fitantanana ny fako – satria tsy omen‘ireo manampahefana toerana sahaza hanangonana ny fako ireo mpifindra monina.
Ny 12 jona 2018, nanao famoriam-ahoaka iray ny ben'ny tanànan'i Calais mba hampisehoana ireo tetikasany ho an'io faritra 2,5 hektara io, fantatra ofisialy amin'ny anarana hazo Chico Mendes. Nihaino olomboafidy iray avy ao amin'ny kaominina niresaka ny tetikasa tamin'ireo mpanatrika, i Natacha Bouchart, ben'ny tanànan'i Calais. Efa ela no napoitran'ny adihevitra ‘ilay hazo’, ho toy ny sisa, tavela tamin'ilay “beau marais” nanan-tantara, ny anaran'ny toerana voalaza, sy ny mponina iray tao amin'nilay faritra, dia nampahatsiahy tamin'ny mpanatrika fa ilay faritra rakotra hazo dia toerana onenan'ny karazam-biby maro isankarazany, izay ahitàna ny fianakaviamben'ny bibilava mipetraka eo akaikin'ny kamory afovoany ao amin'ilay faritra. Tsy nisy fanamarihana natao momba ireo olona mipetraka ao an'ala talohan'ny nanomezan'ny mponina iray hafa sosokevitra somary menamenatra, dimy ambinifolo minitra taty aorian'ny nanombohan'ny fivoriana, hoe tokony hitady vahaolana iray ho an'ireo “olona monina ao”.
Hamadika ilay vala-na hazo ho lasa vala an-tanàndehibe ilay fanavaozana any am-parany, ahitana fiavahana hoe misokatra foana ireo hazo, raha ireo vala kosa afaka hakatona. Hofefena io sombin-tany io manomboka izao mba hisakanana ny fidirana ao ivelan'ireo ora fisokafany, ary misy koa ny eritreritra hametraka fakantsary eny amin'ireo andrinjiro fanazavana ao amin'ny vala. Fitaovana iray, araka ny voalazan'ny ben'ny tanàna, izay hahafahana mamantatra an'ireo tompona alika mangeringery ao anaty vala. Efa nandefa fanafarana fefy ny fiadidiana ny tanàna, saingy tena mijanona ho resaka ambony latabatra ny ambin'ny tetikasa. Fa marobe ireo sosokevitra naroso nandritra ny fivoriana tao amin'ny lapan'ny tanàna, toy ny fametrahana kianja filalaovana, lalana, ary kianja fanaovana ‘kanetibe‘ – izay miavaka noho ny tsy fisiany ireo toeram-pivoahana sy ny toerana misy rano, mangidy ny sandan'ireo rehetra ireo izay mitentina 1,5 tapitrisa euro. Ny tetiandron'ilay tetikasa dia toy ny manambara hoe manan-danja kokoa ireo zavatra sasany noho ireo hafa. Raha toa nomanina ho vita amin'ny taona 2020 ny ampahany goavana amin'ilay fanavaozana, ny volana aogositra 2018 no voalahatra ho apetraka ireo fefy.
Toa efa vonona ny hamadika ireo àla ao aminy ho lasa valan-javaboary i Calais. Tsy fantatra mihitsy izay mety ho tao an'eritreritr'i Chico Mendes, izay nanolotra ny anarany ho an'io hazo kely io, mikasika ny hevitr'i Ramatoa Bouchart. Ilay Breziliana mafana fo, nisy namono tamin'ny 1988, dia nanokana ny fiainany mba hiady ho an'ny fiarovana ny ala mikitroka amazoniana, sy ho an'ny zon'ireo tambanivohitra ary vahoaka zanatany. Nefa mampanontany raha antony anaovana ilay asa ny ho fiarovana ny zavamanan'aina eo an-toerana, na sao izy io fikasàna iray vaovao fotsiny hanalàna ireo mpifindramonina tsy ho eo amin'ireo toerana niainany intsony- politika iray izay toa mbola tsy atsahatr'ireo manampahefana eo an-toerana ny fampiharana azy hatramin'ny namotehana ilay Ala mikitroka.
Tena marina, tonga ao anatin'ny vanimpotoana fandravàna tsy tapaka ny toby fialokalofana ao Calais ny tetikasa fanarenana ny hazon'i Chico Mendes, ny sasantsasany efa ho isanandro vaky, ny ankamaroany fara-fahakeliny indray mandeha isankerinandro. Ao anatin'ny politika vaovao “tsy misy teboka famahàrana“, simbain'ireo manampahefana tsotra izao fotsiny, andefasany entona na potehany ireo tranolay, ireo labasy, ireo fandriana lamba ary ireo bodofotsy. Natao tamin'ny anaran'ny asa fanesorana “entana tsy ilain'ny tompony” ireo fanesorana ireo. Ny tena marina, hetsika miharo herisetra izy io, sady ara-batana no ara-tsaina, mampahatsiahy an'ireo mpitsoa-ponenana fa tsy hanaiky akory ny zony hitady fialofana vetivety ny Fanjakana. Amin'ny alina na vao maraimbe no atao ireo asa, tsy misy fampandrenesana mialoha ary atrehin'ny polisy maro dia maro. Tsy ireo tranon'ny mpitsoaponenana ihany no ravàna, fa tena matetika, giazana koa ireo fananany ary maro no voamarika ireo trangana herisetra isankarazany ataon'ny polisy amin'ireo voatery nifindra monina, anisan'izany ireo zaza tsy ampy taona.
Ho an'ireo olona miaina an-tsesitany, Calais dia toerana iray ahitàna habibiana tsy mitsahatra mitombo, tanàna iray ahitàna ny firoboroboan'ireo rindrina, ireo tamboho ary ireo fefy vy, raha toa ireo zaza tsy ampy taona matory eny an-dalambe noho ny tsy fananana trano fonenana sahaza atolotry ny fanjakàna. Raha samy toa tsy te-hiaro ny zon'olombelona ao avaratr'i Frantsa na ireo Frantsay na ireo Britanika (tanàna akaiky indrindra an'i Angletera i Calais), ny fiharatsian'ny toedraharaha dia raharaha mahafaty raha vao ireny politika ireny no hadihadiana, ampangaina ary any am-parany, asiana fanavaozana. Zo tsy iadaiana hevitra ny zo ho apetraka anaty fialofana: tsy tokony hiankina amin'ny sata manoloana ny lalàna, ny fiaviany na ny zom-pirenen'ilay olona.